Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Nnukwu E-Commerce nke China iji guzobe ụgbọ elu ọhụrụ
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa ozi China • News • ndị mmadụ • Ịzụ ahịa • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Onye guzobere JD.com Richard Li
Ntọala ụgbọ elu ụgbọ elu ọhụrụ na -abịa dịka onye na -ahụ maka ịzụ ahịa n'ịntanetị JD.com Alibaba Group Holding LTd na -agbasa ụgbọ mmiri ya. Ụgbọ elu YTO Cargo, nke YTO Express na-akwado nke Alibaba, na-ewebata ndị na-ebu ibu sitere na ụgbọ elu 767 na 777.
Ụgbọ elu ụgbọ elu ọhụrụ ga -anọ na mpaghara ọwụwa anyanwụ China nke Jiangsu.
Jiangsu Jingdong Cargo ụgbọ elu enwetala nkwado iwu maka ịmalite ụgbọ elu ọhụrụ.
Ụgbọelu ahụ na-eme atụmatụ iji ụgbọ elu Boeing 737-800 maka ụgbọ mmiri ya.
The Nchịkwa Civil Aviation nke China (CAAC) mara ọkwa na Suqian Jindong Zhanrui Enterprise Management, nke ụlọ ọrụ na -achịkwa JD.com Onye guzobere Richard Liu, enwetala nkwado ihiwe ụgbọ elu ụgbọ elu ọhụrụ nke dị na mpaghara ọwụwa anyanwụ Jiangsu.
Jiangsu Jingdong Cargo Airlines, nke nwere isi ndebanye aha nke nde yuan 600 ($ 92.83 nde), enwetala nkwado izizi maka ịmalite ụgbọ elu ọhụrụ, onye na -ahụ maka ụgbọ elu China kwuru na ọkwa.
Otu ụlọ ọrụ nke onye guzobere nnukwu azụmahịa e-commerce nke China JD.com Inc. ga-enye 75% nke isi ntọala ebe ọdụ ụgbọ elu dị na Nantong, obodo dị na Jiangsu, ga-enye ndị ọzọ, dị ka CAAC si kwuo.
Dị ka akwụkwọ CAAC si kwuo, ụlọ ọrụ ụgbọ elu ọhụrụ na-eme atụmatụ iji ụgbọ elu Boeing 737-800 maka ụgbọ mmiri ya.
Boeing, nke na -alụ ọgụ na China na ire ụgbọ elu ndị njem, na -achịkwa ahịa ụgbọ mmiri ụwa niile.
Ọnụ ahịa ụgbọ elu arịgoro elu, nke akụkụ ya bụ mmụba nke ịzụ ahịa n'ịntanetị na-ebute ọrịa.